Ragii Ku Dilay Xildhibaan Saado Cali Warsame Iyo Xildhibaano Kale Magaalada Muqdisho Oo Muuqaalkooga La Baahiyey (Video) – RadioQandala.com
Ragii Ku Dilay Xildhibaan Saado Cali Warsame Iyo Xildhibaano Kale Magaalada Muqdisho Oo Muuqaalkooga La Baahiyey (Video)
Posted on 10 December, 2014 by RadioQandala
Ninkii Dilay Saado Cali Warsame
Ragii diyal Saado Cali oo dil lagu xukumay
Waxaa Dilka Saado Ka Danbeeyay Dahabshiil
Duubo> Sir Culus Dilkii Saado Cali oo Dahabshiil galay -Dahir Alasow
SABABTA LOO DILAY SAADO CALI WARSAME
Daawo Muuqaal Mobil Lagaga Duubay Dilkii Saado Cali
Xogaha hoose ee shabakada RadioQandala iyo jidbaale kasoo gaadhaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in gacanta lagu soo dhigay dhagarqabayaashii ka danbeeyay dilkii arxandarada ahaa ee maalintii arbacada loogu gaystay halyeeyad qaran marxuumad Saado Cali Warsame.
Warka naga soo gaadhaya xafiiska nabad sugida dawlada taagta daran ee muqdisho ayaa daboolka ka qaadaya in dilkaasi loo soo qabtay afar nin oo uu xafiiskaasi ku tilmaamay afartii nin ee dilkaasi ka danbeeyay.
Xogahan hoose ee nasoo gaadhaya ayaa intaasi ku daraya in afarta nin laba kamid ah ay ka tirsanaayeen ilaalada gaarka ah ee raysalwasaaraha dawladaasi cabdilweli sheikh, midna uu yahay ilaalada shirkada dahabshiil halka kale uu dhawaan kasoo hayaamay magaalada hargaysa udna dhashay beesha isaaq.
Baadhitaan lagu sameeyay ragaasi ayay ku sheegeen inay si aan ku talagal ahayn u xabadeeyeen gaadhiga ay saarnayd saado cali warsame, kadib markii ay ka shakiyeen gaadhiga, arintaas oo u muuqata mid aan caqliga saliimka ahi ogolaan Karin, is waydii maxay u carareen hadaysan ogayn ruuxa ay dileen inuu Saado Cali yahay ?
su’aasha kale ee is waydiinta mudani waxay tahay maxaa hal baabuur wadasaaray ilaalada madaxda dawlada iyo ilaalada shirkada dahabshiil muxuuse yahay ninkan la socday ee hargaysa ka yimi ?
ka mid ahaa shakhsiyaadka ay isugu dhawyihiin marxuumada ayaa bogiisa hore ugu sheegay in saado cali u sheegtay inay ka baqdin qabto dil uga yimaada dhanka madaxda dawlada oo ku saabsan heshiiskii qarsoodiga ahaa ee madaxweynuhu la galay dawlada Kenya ee dhanka badda oo dhawaan website QM leedahay lagusoo bandhigay. Ma la is waafajin karaa hadalkaas marxuumada iyo xogahan soo baxaya ?
Dilkan loo gaystay marxuumada Saado Cali ayaa dad badani ku tilmaameen mid qorshaysnaa marka la eego qaabka loo fuliyay ee arxandarada ah iyo hubka culus ee wadada maka almukarama lagu isticmaallay si aan gabasho lahayn.
« Dr.Nuur Faarax Madaxa Hanti Dhowrka Qaranka oo Muqdisho Ka shaqaynaya Tuugo Madax ahna soo saaray
Al-Shabaab oo soo Saaray Film dilkii wiil reer Puntland oo loo dilay Faroole ayaa adeer u ahaa Axmed Max’med Cabdullaahi Faroole »